ढोँगी : सरस्वती श्रेष्ठ सरू | Himal Times
Home सिर्जना ढोँगी : सरस्वती श्रेष्ठ सरू
लघुकथा : ढोँगी
सरस्वती श्रेष्ठ सरू
आज मितिनी आमा धेरै दिनपछि हाम्रो घरतिर आइन् । कोरोनाको महामारीको समयमा कोही घरबाट बाहिर निस्किएका छैनन् । उनले गेट बाहिरबाटै सन्चो बिसन्चो सोधिन् । मैले भित्रै आउनु भनेँ। तर उनी भित्र आउन मानिनन् । यसो खुट्टा तन्काउन बाटोतिर हिँडेकी नानी टाढा जान्न अब घरै फर्किन्छु । दिदी ,दाइभाउजूको बारेमा सोधेँ राम्रै छ भनिन् । तर मितिनी आमाको अनुहार पहिलेजस्तो उज्यालो देखिन र सोधेँ । ” हजुर अलि बिसन्चोजस्तो देख्छु नि आमा ?”
” म सधैँको रोगी हूँ नि छोरी । अहिले त झन् यस्तो रोगको महामारी फैलिएको छ भन्छन् । मलाई केही दिनदेखि रुघा लागेको छ । न त्यही कोरोना पो लाग्यो । ” आमाले आशंका व्यक्त गरिन् । मलाई पनि डरडर पो लाग्यो । तै पनि भनेँ । नडराउनुस् , घरै बस्नुस् , अरुलाई पनि रुघा सर्ने सम्भावना रहन्छ । तातो पानी पिइ रहनुस् , तातो पानीले बाफ लिइ रहनुस् । बारम्बार साबुन पानीले हात धोइ रहनुस् । आत्तिनु पर्दैन । दाइभाउजू ले हेर्नुहुन्छ । “आफै त नि नानी । अहिले जान्छु भन्दै उनी गइन् ।
घरनजिकैका छिमेकी भए पनि म मेरै कामको व्यस्तताले भेटघाट हुँदैनथ्यो मितिनी आमासँग ,न दाइभाउजूसँग नै । केहीछिन पछि मितिनी आमा रोएको सुनेँ । दाइभाउजूको स्वर चर्कोचर्को थियो । ” अलिकति केही हुन हुँदैन छोरीलाई कुरा लाउन पर्छ ? यसरी घरघरै कुरा काट्दै हिँडेर के पाइन्छ ? देलान् नि तिनैले खान लाउन । छोराबुहारीको हुँदो नहुँदो कुरा काट्दै हिन्ने ? के दिए इनाम ?”
आम्मै नि ! म त छ्क्क परेँ । मीत दाइलाई त बुद्धिजीवी नै ठान्थेँ । अरुको घरमा त निकै अर्ति उपदेश दिँदै हिँड्थे । तर आफ्नै आमालाई तथानाम भन्दा रहेछन् । मसँग मितिनी आमाले तिनको बारेमा केही बोलेकै होइनन् । धत् ! कस्ता ढोँगी रहेछन् ?
Previous articleआज मलेसियामा १३७१ जना नया बिरामि भेटिए, निकाे हुने १२०४ जना
Next articleकोकाकोला भनेर विषादी खादा मलेसियामा निधन भएका मदनको मलेसियामामै अन्तिम संस्कार
कोरोनाबाट मलेसियामा निधन हुनेको सङ्ख्या एक हजार नाघ्यो
१ सय ९८ भारतीय नागरिक स्वदेश फिर्ता पठाईयाे